Midowga Musharixiinta oo ka horyimid habraacii doorasho ee Golaha wadatashiga soo saareen - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Midowga Musharixiinta oo ka horyimid habraacii doorasho ee Golaha wadatashiga soo saareen
Midowga Musharixiinta oo ka horyimid habraacii doorasho ee Golaha wadatashiga soo saareen
Xubnaha Mdidmowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulan saacado badan qaatay waxaa ay Maanta ku yeesheen mid kamid ah Hoteelada ku yaal magaalada Muqdisho, kaas oo ay kaga hadleen habraacii doorasho ee shalay gelinkii dambe ay soo saareen Golaha wadatashiga doorashooyinka.
Midowga Musharixiinta ayaa waxaa ay kasoo horjeesteen qaar kamid ah habraacyada ay soo saareen Golaha wadatashiga doorashooyinka, iyaga oo sheegay in hanaan wanaagsan aan loo marin.
War-Saxaafadeed ay soo saareen Midowga Musharixiinta oo uu Warbaahinta u Akhriyay Cabdiraxmaan Cabdi shakuur Warsame ayaa waxaa lagu faah faahiyay mowqifkooda go’aanada shirkii Golaha wadatashiga, iyaga oo sheegay in awoodii doorashada Gacanta loo geliyay Madaxda dowlad Goboleedyada, waxaana kamid ah qodobada ay soo saareen.
1: Goluhu wuxuu si cad u diidayaa qodobadii kasoo baxay shirkii Golaha wadatashiga, gaar ahaan Oday dhaqameedka, magacaabista bulshada rayidka ah, xulista, xaqijinta, dabagalka iyo diiwan gelinta ergooyinka oo dhamaantood gacanta loo geliyey madaxda dawlad Goboleedyada.
2: Goluhu wuxuu u arkaa habraaca doorashooyinka Golaha Shacabka ee ka soo baxay Golaha Watashiga in uu khilaafsan yahay dastuurka dalka iyo heshiiskii 27 Maajo oo dhigaya in doorashooyinka ay ku dhacaan si cadaalad ah, xor iyoxalaalna ah.
4: Goluhu wuxuu in muddo ah hortaagnaa isku daygii uu madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamad C/llaahi Farmaajo ku doonayey in uu doorashooyinka dalka ku boobo. Waxaan suuragal ahayn in Golaha Wadatashiga Qaran ay dhaqankii Farmaajo laga diiday u dabamareeyaan.
Goluhu wuxuu u arkaa in habraacu uu dusha sare magac doorasho ka sito,laakiin gudahiisa uu magacaa bis yahay, wuxuuna ka digayaa cawaaqib xumida
ka dhalan karta doorasho la boobo ama lagu shubto oo ay ka mid tahay.
1- Colaad sokeeye sida haatan deriskeena iyo dalalka kale ee nala midka ah ka dhacday. 2- In shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba ay ka aamin baxaan natiijada doorasho boob iyo ku shubasho ah.
3-In nidaamkii dawladnimada uu waayo sharciyadda iyo aqoonsiga
shacabka, waxgaradka iyo siyaasiviinta doonaysa dawladnimo sax ah.
4- In kooxaha xag jirka ah ka macaashaan aanada iyo tabashada ka dhalata boobka doorashada.
Haddaba Goluhu wuxuu ugu baaqayaa Golaha Wadatashiga Qaran in ay dib uga
fiirsadaan go’aannada ay qaateen. Wuxuuna Goluhu soo jeedinayaa in
1- 135-kii oday dhaqameed ee loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka
beelaha Soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan soo xulista ergooyinka
dooranaya xildhibaannada Golaha Shacabka.
2- Maadaama uu Golaha Shacabka metelo beelaha, waa in odayaasha dhaqanka oo kaashaanaya nabadoonada iyo caaqilada jufada kursiga ku astaysan loo madaxbaneeyo xulista ergooyinka, kaalinta dawlad- goboleedka ay ku ekaato fududaynta iyo amniga doorashooyinka.
3- In la suuliyo caqabadaha badan ee lagu gudbay doorashooyinka, gaar ahaan kuwa la xariira denbi baarista iyo qarashaadka lagu cusleeyey tartamayaasha iyo ergada.
4- In la waqtiyeeyo jadwalka doorashada oo laba jeer xiligeeda horay dib uga dhacday
5- In doorashadu ay ka dhacdo goob dhexdhexaad ah oo amnigeeda sugan yahay, Amniga goobta ay si wadajir ahu sugaan Booliska dawlad- goboleedka, federaalka iyo AMISOM, iyagoo ilaalinaya nabadgelyada goobta, islamarkaana fursad galaangal oo siman u siinaya musharaxilintau tartamaya xilka xildhibaanimo.
6- In aan Xubnihii Baarlamaanki hore baaritaan laguma celi, halka tartamaha cusub ee xilka xildhiban looga joojin karo oo keli ah fal danbiyeed ay Maxkamad xukuntay, iyo in lagu hayo fal argagexiso oo cadayn leh.
7- Si loo kala saaro go’aanada siyaasada iyo hawlaha farsamo, waa in Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal loo madax banaaneeyo kaalinta farsamo ee hirgelinta doorashooyinka.
Goluhu wuxuu ku adkaysanayaa in doorashadu ay noqoto mid xor ah oo xalaal ah, taas oo ah dan qaran oo masiiri ah, kana gudubsan danta tartame kasta eexilliga dhaw.
Ugu danbayn Goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba inay kaalintooda ka qaataan sidii doorashadu ay ku noqon lahay mid xor ah oo sharciyad haysata.
Previous articleTababaraha Arsenal oo weerar kala kulmay taageerayaasha Kooxdiisa
Next articleJubbaland oo musharixiinta ka mamnuucday inay hub ku dhex qaataan Kismaayo